ရသပညာဆိုတာကို မြန်မာလို ဒီလိုမြင်ကြည့်လိုက်တယ်… – AHUNT BHONE MYAT
7 thoughts on “ရသပညာဆိုတာကို မြန်မာလို ဒီလိုမြင်ကြည့်လိုက်တယ်…”
ဇော်ဂျီရဲ့ ရသစာပေနိဒါန်း ၊ဦးရွှေအောင် ရဲ့ ရသစာပေရဲ့ရသ
ဟိုက်ရှားပါ.. တကယ်ကောင်းတာပဲဗျို့. ရေးသင့်တယ်ဗျ…. ဟုတ်ကဲ့
ဘလောဂ်ကတော့ ကိုယ်တိုင်တည်းဖြတ်သူ၊ စာရေးသူ၊ ဒီလိုပါပဲ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ စာရေးသူကော စာဖတ်သူတွေကော ထိရောက်နေပါတယ်.. .ကျေးဇူးပါ
Follower ထဲ ထည့်သွားတယ်…. :)
ရသ ခံစားမှု တစ်ခုခု လောက် ပေးနိုင်ဖို့ အများကြီး ကြိုးစားရအုံးမယ်ဆိုတာ လက်ခံသဘောပေါက်ပြီးသားပါ..
ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ ခက်သိမ်းကလျာ ရှုဖွယ်သာတည်းကိုလည်း ဖတ်ကြစေချင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး ကောင်းပါတယ်။ အောက်မှာ ရည်ညွှန်းကိုးကားစာရင်း ပေးသင့်တယ်။
ဒီဘလော့ဂ်ကို အရင်ကတည်းက တခါတလေ လာဖတ်ဖူးနေတာပါ။ ကျနော့်ဘလော့ဂ်ကို လာလည်ကြသူတွေရဲ့ လာရာလမ်းကြောင်း လင့်ခ်ကတဆင့် ဆိုပါတော့…။ :)
ရသနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ တင်ပြထားတာ ပညာရပါတယ်။ မှတ်သားစရာတွေလဲ အများကြီးမို့ ဖတ်ဖို့ တကူးတက ဖိတ်တာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လဲ ရေးတဲ့သားတဲ့အခါ ချင့်ချိန်ရတာပေါ့။ မပြောရဲပြောရဲနဲ့ တခုလောက်တော့ ပြောကြည့်မလို့…၊ ကိုအံ့ဘုန်းမြတ် စာထဲမှာ စာလုံးအကျ (သတ်ပုံများတာမဟုတ်) တွေ အတန်ငယ် ပါတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ ဘယ်လိုခေါ်မလဲ အရသာကောင်းတဲ့ ထမင်းလုပ်မှာ ခဲလုံးပုစိကွေးလေးတွေ ကိုက်မိသလို တူနေလို့ပါ။ ဆရာလုပ်သလိုဖြစ်ရင် ဆောရီး။ :)